साप्ताहिक राशिफल (२०७४/२/५ देखि ११ गते सम्म) | mulkhabar.com
साप्ताहिक राशिफल (२०७४/२/५ देखि ११ गते सम्म)
May 19, 2017 | 1:27 pm 318 Hits
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) Aries : शारीरिक परिश्रम बढ्नेछ । भूमि वाहनको किनबेचबाट लाभ मिल्ने छैन । विवेश व्यापार फाइदाजनक छ । साहित्य लेखनमा प्रगति हुनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । साझेदारी व्यवशायबाट आंशिक लाभ प्राप्त हुनेछ । यात्रा कष्टकर हुनेछ । रोजगारीको अवसर मिल्नेछ । मुहारमा कान्ति छाउनेछ । मान्यजनको सहयोग मिल्नेछ । अचल सम्पति जोडिएलान् ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो) Taurus : परिश्रम अनुसारको प्रतिफल नआँदा दुखी भइएला भूमि बाहन तथा वैदेशिक व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रको लगानीबाट आंसिक प्रतिफल मिल्नेछ । पारिवारिक सम्बन्धमा मनमुटावको स्थिती रहनेछ । प्रेमी प्रेमीकाबीचको सम्बन्धमा शंका उत्पन्न हुन सक्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । रत्न आभूषण किनिएलान् । भाइबन्धुसँग मनमुटाव हुनसक्छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) Gemini : चल सम्पतिको क्षय हुने योग छ । भाइबन्धुबीचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामाजिक लोकोपवाद लाग्न सक्नेछ । सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न अवसर मिल्नेछ । जागिरमा स्थानान्तरणको योग रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बीच सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । आफन्तजनबाट प्रशस्त सहयोग पाइनेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) Cancer : विदेश यात्राको योग छ । भूमि वाहनमा खर्च गरिएला कार्यमा उत्साह र जाँगर बढ्नेछ । वाणीको प्रभाव बढ्नेछ । आफन्तसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । विदेश व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ । न्यायिक क्षेत्र बलियो रहेको हुँदा मुद्दा मामिलामा जीतको सम्भावना रहेको छ । रोजगारीको अवसर मिल्नेछ । कृषि कार्यबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) Leo : साहित्य कला तथा सिर्जनाको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । प्रशासनिक उल्झनको सामना गर्नुपर्ला आफन्त मान्यजनको सहयोग मिल्नेछ । पदीय दायित्व बढ्नेछ । अपजसको सामना गर्नुपर्ला । महत्व पूर्ण कार्यको थालनी हुनेछ । सामाजिक कार्यमा समय वित्ला । रोजगार, पद प्रतिष्ठाका लागि खर्च गरिएला । कृषि कार्य बाट आंशिक लाभ मिल्नेछ ।
कन्या (टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) Virgo : मित्रहरुबाट अन्तर्घातको सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ । दैविक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ला शारीरिक पिडा बढ्नेछ । प्राविधिक सामनाको किनबेचमा लाभ मिल्नेछ । कानुनी वादविवाद बढ्नेछ । लामो यात्राका योजना बन्नेछन् । पशुपालनबाट आंशिक सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा खर्च हुनेछ । चञ्चलता बढ्नेछ । तनाव पनि बढ्न सक्छ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) Libra : तरल पदार्थको व्यापारमा लाभ मिल्नेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा जीत हुनेछ । कुटनितिक तरिकाबाट नयाँ कार्यको थालनी गरिनेछ । प्रेमी प्रेमीकाबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । साझेदारी व्यापारबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ । गुप्त रोगले सताउने देखिन्छ । राजनीतिक विवादको सामना गर्नुपर्ला । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । पारिवारिक समन्वय र सद्भाव बढ्नेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) Scorpio : पारिवारिक सद्भावना बृद्धि होला । वैचारिक मतभेद बढ्न सक्छ । मान्यजनको सहयोग मिल्नेछ । यात्राको योग बढ्नेछ । रासायनिक पदार्थको व्यापार बढ्ने देखिन्छ । शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरिएला । यात्रा गरिएला । अनावश्यक वादविवादले खिनन बनाउला । अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागि भइएला । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहला ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे) Sagittarius : अनावश्यक मनमुटाव र तनाव बढ्न सक्छ । प्राविधिक क्षेत्रको लगानीबाट लाभ मिल्नेछ । कानुनि अड्चनको सामना गर्नुपर्नेछ । सौन्दर्य सामाग्रीको किनबेच गरिनेछ । महत्वपूर्ण कार्य विग्रन सक्छ । मान सम्मान मिल्ने देखिन्छ । विलासिताका सामागी्र जोडिएलान् । प्रेमी प्रेमिकाबीच सम्बन्ध सुमधुर रहला । राजनितीक अन्तर्घातको सामना गर्नुपर्ला ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि) Capricorn : मित्रहरुबाट अन्तर्घात हुन सक्छ सावधान रहनुहोला । शारीरिक दुर्वलता बढ्नेछ । विशिष्ट कार्य योजना बन्नेछन् । सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी भइएला दाम्पत्य जीवन सुखमय रहला । सामाजिक कार्यमा समय वित्नेछ । पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ । प्रेमी प्रेमीकाबीच सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । चञ्चलता बढ्नेछ । राजनितीक अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ला ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा) Aquarius : लेखन कला र साहित्य क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । आपसी सद्भावमा बृद्धि हुनेछ । मान सम्मान प्रसिद्धिको अवसर जुट्नेछ । अचल सम्पति किनबेचको योग देखिन्छ । तरल पदार्थको व्यवसायबाट लाभ मिल्ने देखिदैन । मित्रहरुको सहयोग मिल्नेछ । न्यायिक विवादका कारण बिचलित भइएला । यात्रा झन्झटिलो हुन सक्छ । दाम्पतय सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) Pisces : पराक्रम बढ्नुका साथै कार्यमा सफलता मिल्नेछ । मित्र कुटुम्वको सहयोग प्राप्त होला रोकिएको काम बन्नेछ । साझेदारी व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । कष्टकर यात्राको योग छ । राजनीतिमा वादविवादको सामना गर्नुपर्ला । घात अन्तर्घातको योग पनि देखिन्छ । वैदेशिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आलस्यले सताउने छ । मनोरञ्जनमा खर्च होला ।
ज्यो. पं. ईश्वरी प्रसाद भट्टराई (सिताराम) दियाले –१ , ओखलढुंगा